काठमाडौं – मन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट सञ्चारकर्मीमाझ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगश भट्टराईले भनेका थिए, ‘बल्ल त ब्याटिङ गर्न आएको छु, एक–एक रन लिएर अल्मलिने मान्छे होइन म, छक्का–चौका हान्ने हो ।’
नेपालमा पछिल्लो समय क्रिकेटको क्रेज बढिरहेको छ । क्रिकेटमा छक्का–चौका यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि जसको माध्यमबाट एकै पटकमा ६ वा ४ रन जोडिन्छ । क्रिजमा ६ वा ४ राउन्ड कुदे बराबरको रन एकै शटमा, त्यो पनि कुद्दै नकुदी ।
क्रिकेटको प्रसंग जोड्दै उनले सरकारमा बसेर ‘त्यस्तै आक्रामक ढंगले काम गर्छु’ भन्न खोजेका थिए ।
साउन १६ गते पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शहीद स्तम्भमा माल्यार्पणपछि बोलेको उक्त कुराले झण्डै साढे दुई महिनापछि आइपुग्दा मन्त्री भट्टराई स्वयंलाई व्यंग्य गरिरहेको छ ।
‘अक्षम नेतृत्व’का कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, अनि मन्त्री भट्टराई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् ।
यसलाई हेर्दा त लाग्छ, छक्का–चौका हान्ने होइन, क्लीन बोल्ड हुने खतरामा छन्, मन्त्री । जबकि उनी आफैंले भनेका थिए – काम गर्न सकिनँ भन्ने लाग्यो भने तुरुन्तै राजीनामा दिन्छु ।
क्रिकेटमा छक्का–चौका ब्याट्सम्यानका लागि जति उत्साहप्रद हुन्छ, त्यसको दोब्बर चोट क्लीन बोल्ड हुनुपर्दा पर्छ । शुरूमै छक्का–चौका हान्न नसकेपनि क्रिजमा टिकिरहँदा भविष्यमा त्यो अवसर प्राप्त हुनसक्छ । तर नेपाल वायुसेवा निगमको बढ्दो घाटा मन्त्री भट्टराईका लागि अनुभवी बलरले पहिलो ओभरमै फालेको ‘योर्कर’ बलजस्तै बन्ने खतरा छ ।
योर्कर बल यसरी आउँछ कि प्रायः ब्याट्सम्यानले आफ्नो पछाडिको स्टम्प ढलेको पत्तै पाउँदैनन् । क्रिकेटमा योर्कर डेफ्थ ओभरमा (बल पुरानो भएपछि) बढी फालिन्छ तर योगेशलाई शुरूवाती ओभरमै योर्करको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
योर्करमा ब्याट्सम्यानलाई एउटा अवसर त हुन्छ, राम्रोसँग बल जज गर्न सक्यो भने ‘फूलटस’ बनाएर छक्का हान्न मिल्छ तर त्यसका लागि बलरको हातबाट बल छुटेको मिलिसेकेण्डमै चिनेर ब्याट्सम्यान तयार भइसक्नुपर्छ ।
मन्त्री भट्टराई यो योर्करमा क्लीन बोल्ड हुन्छन् कि अघि बढेर छक्का हान्छन्, त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ । पदभार ग्रहणपछि ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई वाह ! भन्ने बनाउँछु’ भनेका भट्टराईले अहिलेसम्म त्यो संकेत देखाएका छैनन् ।
कार्यदलले नै भन्यो – निगमको नेतृत्व ‘अक्षम’ !
मन्त्रीमा नियुक्त भएको एक सातापछि मन्त्री भट्टराईले ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरे । पूर्व सचिव सुशील घिमिरे नेतृत्वको ५ सदस्यीय उक्त कार्यदललाई हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययनका प्रतिवेदन विश्लेषण र निगमको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको थियो ।
कार्यदलमा संयोजक घिमिरेका अलावा लेखा विज्ञ (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोध कुमार कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन (पाइलट) सुधीर शम्शेर राई र संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य थिए ।
कार्यदलले मन्त्री भट्टराईलाई बुधवार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमान खरिद गरेको एक वर्षसम्म उपयुक्त गन्तव्य खोज्न नसक्नु र शुरू गरेको ओशाका उडान पनि निरन्तर घाटामा रहनुलाई निगमको नेतृत्व क्षमतामा कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ–
‘निगममा वाइडबडी जहाज ल्याइसकेपछि ती जहाजहरूले अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन् । कम्तिमा ८–९ घण्टा दूरीको उडानमा लगाउनुपर्ने जहाज छोटो दूरीमा उड्दा यात्रुलाई छोटो दूरीमै वाइडबडी उडानको अनुभव हुनेबाहेक जहाजको डिजाइन फिलोसोपी अनुसार उपयुक्त मानिँदैन ।
इञ्जिनको साइकल छिटो सकिने, सञ्चालन खर्च अधिक हुने हुँदा कस्ट बेनिफिट हुने सम्भावना धेरै न्यून रहन्छ । तसर्थ, निगमको वाइडबडीले उडान गररिहेका वर्तमान गन्तव्यहरूमध्ये धेरैजसो उपयुक्त गन्तव्य होइनन्, व्यावसायिक योजनामा उल्लेख भएजस्तो नयाँ गन्तव्यहरू निगमले प्राप्त गर्न नसक्नुका स्पष्ट कारणहरू देखिएनन् ।
२०७६ भाद्र १२ बाट जापानको ओशाका शहरमा निगमको ए३३० ले उडान भर्न शुरू त गरेको छ, तर पनि शुरूदेखि नै यात्रुको आकर्षण कम रहेको र विविध समस्यामा अल्झेका कारण उक्त उडानबाट मुलुक र निगमलाई अपेक्षित फाइदा पुग्न जाने देखिँदैन । निगम व्यवस्थापनको ए३३० जहाज उपयोगको योजना, योजना कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता र लापरवाहीको कारणले गर्दा जहाज उपलब्ध भएको एक वर्षभन्दा बढी भैसक्दा पनि व्यावसायिक हिसाबले उपयुक्त गन्तव्य तय हुन सकेको छैन ।
आफैंले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिसँग पछिल्लो समयमा आएर अदालती मुद्दा मामिलाको अवस्थामा पुग्नु र अत्यन्त न्यून यात्रु क्षमताका कारण साताको तीन उडानबाट दुई उडानमा झार्नुले पनि निगमको सेक्टर विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको अभाव स्पष्ट देखियो ।’
सञ्चित घाटा नै झण्डै साढे ५ अर्ब !
प्रतिवेदन अनुसार कुल पूँजी ३१ अर्ब ०४ करोड रहेको निगमको ऋण ४० अर्ब १३ करोड ३८ लाख १६ हजार ६७८ रुपैयाँ छ । असार मसान्तसम्ममा निगमको सञ्चित घाटा नै ५ अर्ब २१ करोड ७६ लाख नाघेको देखिन्छ । निगमले तिनुपर्नेमध्ये ऋणमध्ये ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख ३४ हजार ९५४ रुपैयाँ असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यसैगरी २ अर्ब ५५ करोड अल्पकालीन र ४६ करोड २५ लाख सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण रहेको छ । ३३ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण भने निगमले आफ्नो अनुकूलतामा तिर्न सक्ने खालको छ ।
ओशाका उडान : एकपटकमै करोड घाटा !
वाइडबडी विमान खरिदपछि त्यसलाई नयाँ गन्तव्य खोज्ने क्रममा जापान उडानका लागि पहल शुरू भएको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यस वर्षको शुरू (वैशाख)मै उडान अनुमति पाएपनि भदौ दोस्रो साताबाट मात्र उडान शुरू भएको हो । यसबीचमा गत जुलाईका लागि तय भएको उडान रद्द भएको थियो ।
तयारीका लागि झण्डै ५ महिनाको समय पाउँदा पनि पर्याप्त प्रचार–प्रसार र तयारी गर्न नसक्ने निगम व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण एउटै उडानबाट लाखौं घाटा भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौंबाट वाइडबडी विमान ओशाका पुगेर फर्किंदा अनुमानित खर्च १ करोड २० लाख हुन जान्छ । निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्द नै एक करोड बराबर खर्च हुने स्वीकार्छन् ।
निगमले काठमाडौं–ओसाका एकतर्फी प्रबद्र्धनात्मक भाडादर ३६ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकेको छ । दुईतर्फी यात्राका लागि भने ७२ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ ।
यही भाडादरले हिसाब गर्र्ने हो भने काठमाडौंबाट ओसाका गएको विमान काठमाडौं फर्किंदासम्मको लगानी मात्र उठ्न दुईतर्फ गरी कम्तिमा ३२४ यात्रुले शुल्क सहितको टिकटमा यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । २७५ सिट क्षमताको वाइडबडी विमानले १६२ भन्दा कम यात्रु बोक्दा घाटा नै हुन जान्छ ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौं–ओशाका–काठमाडौं उडानमा सरदर ४० यात्रुले मात्र यात्रा गरिरहेका छन् । यसरी निगमलाई एउटा उडानबाटै ८० लाखभन्दा बढी घाटा भइरहेको छ ।
यसबीचमा भएका काठमाडौं–ओशाका–काठमाडौं सात उडानबाट ५ करोडभन्दा बढी घाटा भइसकेको छ । साढे ५ अर्ब पुग्न लागेको निगमको घाटा पछिल्लो समय दिनप्रतिदिन लाखौंका हिसाबले बढिरहेको छ ।
व्यवस्थापकीय सुधार र ‘अक्षम’ नेतृत्व परिवर्तनमा समयमै ध्यान नजाने हो भने डुब्न लागेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम उठ्न सक्ने देखिँदैन ।
मन्त्री भट्टराईसामु आफूले भनेजस्तै ‘छक्का–चौका’ हानेर ‘वाह! नेपाल एयरलाइन्स’ भन्ने बनाउने अवसरसँगै क्लीन बोल्ड हुने खतरा पनि छ ।